MUSHARKA KIDA (RIYAHA, ROODHIDA): SHARAXAAD KA BIXI WAXAY U EGTAHAY IYO MEESHA AY KOREYSO, SIDA LOO KARIYO - SOOSAARKA DALAGGA
Dabeecadda, waxaa jira tiro badan oo ah noocyada fangaska, sidaa daraadeed ma ahan wax la yaab leh in ay jiraan "dadka ku nool kaynta" qaar ka mid ah xitaa aysan maqlin. Mid ka mid ah waa mushaarka ariga, oo badanaa la iska indhatiray kuwa wax soo goynaya.
Mushinka goynta ayaa iska leh qoysaska of boletes, caanaha saliidda. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa ariga, louisers, taageere ku dhageeysan, lo'da, saxanka subagga qalalan, Ivanchik. Ariga waa la cuni karaa waxana uu ku jiraa qaybta afaraad ee qiimaha nafaqada.. Halabuurka fangaska waxaa ka mid ah fosfooraska, magnesium, zinc, amino acids, sonkorta, fiyuusta cuntada, lecithin, phosphatides. Laga soo bilaabo faytamiinada guluubka waxaa ku jira B1, B2, D, PP. Borotiinada ku jirta boqoshaada ayaa waxaa jidhka u soo jiiday 70%, iyo dufanka by 95%.
Ma taqaanaa? Mushaharka ugu da 'weyn waxaa laga helay 1859, oo ku jirta fosil, taas oo ku dhawaad ​​420 milyan oo sano.
Waxay u egtahay
Haddii aad qorsheynayso kala-soocidda miisaanka, ka dibna ma dhibayso in aad waxbadan ka ogaatid waxa riyuhu u eg yahay.
Si loo kala saaro caarada waa sahlan tahay. Waxay leedahay dabool yar oo leh dhexroor oo ah 3-9 cm, muuqaalka qaabka leh tubercle ee dhexda. Gubashada geesaha dusheeda waxay noqotaa mid khafiif ah. Waa qalalan oo siman, iyo xilliga roobku waxay noqdaan muusik iyo carro. Midabka daboolkiisu wuxuu noqon karaa midab huruud ah, bunni ah, mararka qaarkood bunni, iyadoo ku xiran xaaladaha sii kordhaya.
In boqoshaada dhallinyaro ah, caps waa hagaagsan, xitaa, iyo gooshihii hore waxay lumiyaan muuqaalkooda iyo wareegsan, noqdaan qaabeeyey iyo dillaacday.
Jidhka cunnooyinka waxay leeyihiin muuqaal cufan oo cufan. Waxay leedahay midab huruud ah oo leh dhadhan roodh leh.
Waa muhiim! Kalluumeysatadu waxay soo jeedinayaan in ay iska ilaaliyaan caruurta aadka u da 'weyn iyo kuwa da'da ah, maadaama ay culus yihiin oo aan fiicnayn jidhka. Sidoo kale, ma cuni kartid boqoshaada carruurta ka yar 3 sano.
Qeybtan miisaanka miro ayaa leh dherer 3 illaa 10 cm, dhumucduna waxay qiyaastii 2 cm. Lugta waa cylindrical, waxay noqoneysaa mid cidhiidhi ah oo u dhow. Ma laha maqaar, laakiin maqaarkeeda sare waa la kala saari karaa. Midabka lugaha ayaa la mid ah sida kan lafdhabar u ah - waa caleemo cagaaran, midab khafiif ah, bunni ah.
Dhabarka daboolka waa lakabka tubada ee ku xiga. Tuubbooyinka hoos ayuu u yar yahay lugta. Midabkoodu wuxuu ku xiran yahay da'da fangaska: da'da waynu wuxuu yahay, madow ee tubbada.
In riyaha yar yar, waxay yihiin hurdi iftiin, iyo dadka waaweyn - brown. Dufannada dibadda ee tuubooyinku waa kuwo ballaaran iyo xagal leh, halka godadka gudaha ee yar yar yahay iyo dhuuban.
Boqoshaada ugu faa'iidada leh waa: chanterelles ayadoo lagu caawinayo sida loola dhaqmo, iyo sidoo kale boqoshaada porcini, jamciya, agarics malab, volushki, ryadovki, mokhovik, boqoshaada caano, likaha boletus iyo likaha boletus.
Daawooyinka budada ah ee carruurta waa mid bunni ah oo bunni ah ama midab leh.
Meesha laga helo, iyo goorta aad soo ururin karto
Carruurtu waxay ku kortaan kaymaha geedo, ugu yaraan - kaymaha isku dhafan, oo ka hooseeya geed, ciidda ciidda. Wuxuu ku kori karaa dhulalka qoyan, jawiga qoyan, beeraha iyo cawska. Doorashada gobollada leh cimilada dabiiciga ah. Mushrooms waxaa laga helaa si gaar ah iyo kooxo yaryar. Muddada bislaanshaha ee carruurta waa laga bilaabo Juun ilaa Nofembar. Goosashada wanaagsan waa la soo ururin karaa kadib roobab xoog leh.
Waa muhiim! Laguma talin in la soo ururiyo boqoshaada agagaarka warshadaha, maadaama ay si fiican u soo saaraan walxaha shucaaca.
Carruurtu waxay ku fiican yihiin hal mar wax karinta, iyo goosashada jiilaalka. Waa la karin karaa, la shiilay, la marin karaa oo la qalajiyey. Oo iyaga u diyaari saliid ah, oo lagu daro maraq.
Thanks to koofiyadaha qalalan, boqoshaada ayaa inta badan waa nadiif ah.
Laakiin ka hor inta aan la karin, waxay weli u baahan yihiin in si fiican loo xalliyo, loo nadiifiyo oo laga saaro meelo duufaan ah. Si aad u nadiifisid qashinka, ku dhaq biyo yar dhawr daqiiqo, raaci oo waxaad bilaabi kartaa cunto karinta.
Sidee iyo intee le'eg ayaad u karisid
Si aad u kariso caruurta, waa in la gooyaa saddex ama afar gogo 'oo ku rid digsi. Markaas waxaad u baahan tahay inaad buuxiso boqoshaada biyo iyo isku kari ilaa 20-30 daqiiqo. Dabadeed, waxay diyaar u yihiin inay wax cunaan.
Ma taqaanaa? Mushrooms waxay leedahay awood xoog leh oo wax taraysa oo ka caawisa inay koraan asphalt iyo xitaa marble. Cadaadiska saxda ah ee koritaanka wuxuu gaari karaa todobo jimicsi, taas oo u dhiganta cadaadiska taayirada gaariga 10-tone.
Si aad u marineyso caruurta, waxaad u baahan doontaa:
boqoshaada cusub - 1 kg;
cusbo - 3 tsp;
sonkorta - 2 tsp;
basbaaska madow - dhowr digir ah;
oo khal. 9% - 3 tbsp. l
Mushrooms waxay u baahan tahay inay kala soocdo, dhaqdo, nadiifiso. Shayada waaweyn ayaa lagula talinayaa in la gooyo. Kadibna waxaa la kariyaa rubuc saacad ah oo mar labaad maydhay.
Si aad u diyaariso marinade, cusbo, sonkor, xiirto, toon, basbaas, caleen caleen, dill waa in lagu qaso biyo saafi ah.
Kadibna waxaad u baahan tahay inaad ku darto boqoshaada, isku kari oo isku kari waayo 5 daqiiqo oo kale.
Baro sida loo marin karo boqoshaada sida boqoshaada caanaha, boletus, iyo boqoshaada.
Ka dib markaa, ka saar digsiga kuleylka, ku dar geed isbariineed, ku rid carruurta ay la socdaan marinade ee dhalooyinka laisugu barbaro leh dabool leh.
Sida loo qalajiyo
Si aad u qallajiso boqoshaada, waa in la xalliyaa, laga saaro meelo duufaan ah, maydhin, la tirtiro. Caadi ahaan way qalalan yihiin, laakiin haddii loo baahdo, waa la gooyaa qaybo waaweyn. Carruurta diyaarka ah oo diyaarsan ayaa la qoyay qorraxda.
Waxa kale oo aad iyaga ku dari kartaa taarikada khafiifka ah waxayna iyaga u diyaarin kartaa qalajinta qolka si fiican u hawo leh dhowr maalmood.
Waxaa jira hab kale, si dhakhso ah u qalalan. Si arrintan loo sameeyo, u dhig boqoshaada foornada oo qallalan heerkul ah 70 ... 80 ° S oo leh albaabka albaabka.
Waxaad ka sameysan kartaa budada musqusha laga bilaabo carruurta qalalan, kaas oo aad ka heli karto maraq kareemka delicious, maraqa, tufaaxa. Waxay kaliya u baahan yihiin in ay qaawiyaan Booqdaha kafeega - iyo budada cajiib ah ee suxuunta dhadhanka diyaar. Inta lagu jiro "ugaadhsiga aamusnaanta" ha ka tegin sida likaha sida riyaha. Waxay leedahay sifooyin nafaqo leh oo qiimo leh, way fududahay in la isku nadiifiyo lana nadiifiyo. Iyo sidoo kale boqoshaada kuwaas oo aad karisid wax walba oo dhadhan fiican leh, soo qaado qallaji, iyaga qalaji, samee budada likaha, taas oo ku dari doonta dhadhan gaar ah suxuuntaada.